raha araka ny fanazavan’ny sefom-pokontany Randrianarivony Solofoniaina. Saika lasibatra avokoa mantsy ireo olona mandalo anaty fiara tratry ny fitohanana hatramin’izay, hany ka voasokajy ho faritra mena mihitsy ity faritra ity. Na izany aza anefa, hoy izy dia mbola misy ihany ny fanendahana sy ny hala-botry izay tsy fantatra intsony ny olona manao azy. Efa miara-miasa amin’ny mpitandro ny filaminana moa ity fokontany iray ity miampy ny fiambenana isak’alina hataon’ireo vatan-dehilahy, antony nampilamindamina ny fiainan’ny mponina. Tsiahivina fa miisa 3600 ireo mponina ao amin’ity fokontany iray ity ka ny 80 %-n’izy ireo dia fianakaviana sahirana mivelona amin’ny sasa lamba, ny fanaovana biriky ary ny fakana fasika avokoa.